Shir lagu gorfeeyey Amniga oo ka dhacay Viila Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddiga amniga qaranka ayaa magaalada Muqdisho uga wada hadlay xaaladda ammaan ee dalka iyo sidii loo xoojin lahaa dagaalka lagula jiro malleeshiyada Al-Shabaab.
Ra’iisal wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed iyo wasiirrada Gaashaandhigga Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, Amniga Qaranka Khaliif Axmed Ereg, Arrimaha Gudaha C/llaahi Goodax Barre iyo Caddaaladda Faarax Sheekh C/qaadir iyo saraakiisha ciidamada ayaa ka qeybgalay shirka.
Kulanka oo waqti badan qaatay ayaa waxaa looga hadlay arrimo kale duwan oo ay ugu horeyso xoojinta amniga, Howlgalka Badweynta Hindiya, dilkii hogaamiyihii Alshabaab, iyo arrimo kale oo ku saabsan horumarka dalka.
Madaxweynaha ayaa u jeediyay ciidammada dowladda inay sii wadaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab ee looga saaro guud ahaanba dalka, wuxuuna ku ammaanay dadaalladooda ku aaddan xaqiijinta amniga dalka.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa uu ku tilmaamay dilka Hogaamiyihii Al Shabaab mid horumar u ah dadka Soomaaliyeed.
Dowladda Soomaaliya iyo dalalka ciidamadu ka joogaan Soomaaliya ayaa heegan sare galay kadib markii Mareykanku 1-dii bishaan duqeyn ku dilay hogaamiyihii Alshabaab, Abuu Zubeyr.